Izu Izu Ike nke Europe na Ljubljana, isi obodo Slovenia
Home » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Izu Izu Ike nke Europe na Ljubljana, isi obodo Slovenia
Kwa afọ, maka afọ iri na isii na-esote, Obodo Ljubljana na-ekere òkè na European Mobility Week n'etiti 16 na 16 Septemba, mkpọsa ahụ, nke na-eme ka ọtụtụ puku obodo Europe dị na mgbalị ha iji kwalite ndị mmadụ na ụdị agagharị gburugburu ebe obibi.
Obodo nke Ljubljana ya na ngalaba ya, ọrụ ya, ụlọ ọrụ ọha na eze na ụlọ ọrụ, na mmekorita ya na ndị ọzọ metụtara ya, òtù, ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara na-ahazi izu nke iche iche, ihe na-atọ ụtọ na agụmakwụkwọ na-eme ka ị mata banyere omume njem njem.
EMW 2017 n'okpuru slogan »ringkekọrịta ga - eme ka ị gaa n'ihu« ka a na - atụnye gị ume iji njikọta njem, ịkwalite ịkekọrịta ịnya ịnyịnya na ijikọta ụdị dị iche iche nke agagharị na obere akara carbon n'otu njem.
N'ihe ruru 10 dị ka atụmatụ atumatu, ihe omume 8 nke izu, ihe omume otu ụbọchị na ọtụtụ ihe na mpaghara niile nke Obodo Ljubljana na Car Free Day anyị na-egosi ọzọ n'afọ a otu anyị si emejuputa »green «Ihe mgbaru ọsọ ebula na 32 na Ljubljana Vision 2007 nke nyere anyị aha European Green Capital 2025 na European Mobility Week Awards (maka ihe ndị a rụzuru na mpaghara ahụ na 2016 na 2003).
Usoro ndị na-adịgide adịgide n'afọ a bụ:
• Mkpochapu nke ịgba agba »nwa tụrụ«
N'ịgbalị imeziwanye ọnọdụ ịgba ịnyịnya na Ljubljana anyị na-ewepụ adịghị ike na akụrụngwa ịgba ịnyịnya ígwè na ebe atọ.
• Ntọala ụzọ ụgbọ ịnyịnya na Delenjska ụgbọ okporo ígwè
• Ntọala nke ụzọ ịgba ịnyịnya ígwè n'otu akụkụ Vojkova Street
• Mgbasawanye nke usoro BicikeLJ
N'afọ a, anyị ga-ewulite ụlọ ọrụ ọhụrụ asaa nwere ịnyịnya igwe 70 na mkpokọta dị ka akụkụ nke usoro mgbazinye igwe igwe BicikeLJ. Nke a na-aga n'ihu ịgbasawanye netwọk ahụ na ọdụ 51 na ịnyịnya ígwè 510.
• Ntọala nke ogige ịnyịnya ígwè KoloPark
A na-ekepụta ebe ntụrụndụ ọzọ dịka ihe atụ nke ogige ịnyịnya ígwè KoloPark dị na Šiška, akụkụ ugwu ugwu ọdịda anyanwụ nke Ljubljana, maka ebumnuche maka egwuregwu na ịzụlite nka site na iji ụgbọ ala dị iche iche site na ịnyịnya, ịgba skuta, skateboard, rollerblades na roller skates in pushing ụgbọ ala. Nke a na - eme ka itinye aka n'ọrụ oge anaghị etinye aka na Bežigrad, akụkụ ugwu nke Ljubljana.
• Mgbasawanye nke usoro ọdụ ụgbọ-ekerịta ụgbọ ala
N'afọ gara aga, n'ime usoro ihe omume nke European Green Capital 2016, anyị na-ewebata sistemụ nkekọrịta ụgbọ ala eletrik, nke na-adịwanye mfe ịnweta site na ọdụ ọhụrụ. Na ndị dị ugbu a, anyị gbakwunyere ndị ọhụrụ asatọ.
• Ntọala ọdụ ụgbọ okporo ụzọ PROMinfo
Enweta nkwado na-adịgide adịgide site na ịnweta nke ozi maka atụmatụ njem echebara echiche. Anyị guzobere ọnụ ụzọ na-enye ndị ọrụ ozi dị iche iche na ọnọdụ okporo ụzọ dị ugbu a, gụnyere ozi gbasara njupụta okporo ụzọ na mpaghara nke Obodo Ljubljana, oge mbata ụgbọ ala, ọnọdụ na njedebe Bicikelj, nnweta na ebe ndị na-adọba ụgbọala nke ụlọ ọrụ obodo LPT na-achịkwa, wdg.
• Okwu mmalite nke ikpo okwu nkwukọrịta »Pusti se zapeLJati« (Ka A Wepu Onwe Gị)
Ejirila ikpo okwu nkwukọrịta maka nkwalite na mmata banyere isiokwu nke agagharị agagharị iji gbaa ụmụ amaala na ndị ọbịa na Ljubljana ume ka ha jiri ụkwụ na-agagharị n'obodo ahụ, na-eji ịnyịnya ígwè, njem ọha na eze ma ọ bụ ụdị njem ndị ọzọ na-eme ka gburugburu ebe obibi. Okwu a na-akpọkwa ha òkù - mgbe ha hapụrụ ụgbọ ala na nchegbu niile ha na - akpata - nwee mmetụta nke obi obodo na ikwe ka Ljubljana na-eme enyi, ịhụnanya na ịma mma. Nkwupụta okwu a na-ezo aka ọ bụghị naanị n'okporo ụzọ, kamakwa ọ bụ ngosipụta nke omume Ljubljana ma mesie ike otu mbugharị na-aga n'ihu na-eme ka ahụike ụmụ amaala. N'otu oge ahụ ọ bụ mkpesa maka ịkwagide ihe na mgbanwe nke omume njegharị gaa »greener« ones.
• Mwepụta nke ọrụ URBAN-E
N'ime usoro nke URBAN-E anyị na-ehiwe na nkwado na ụlọ ọrụ Petrol ụlọ ọrụ 50 na-akwụ ụgwọ ọhụrụ maka ụgbọ ala eletrik na iwebata usoro ngagharị na-agagharị na Bratislava na Zagreb Dịka akụkụ nke ọrụ ahụ, anyị na-ezube iwebata ọrụ tagzi site na iji ụgbọ eletrik. Ihe oru ngo a, nke EU kwadoro ya, ga aga n'ihu site na 1 October 2017 rue 31 Disemba 2020.
• Nnweta nke akpaka eji atụ ihe na ụlọ atọ
Anyị na-agbakwunye usoro iji hụ na nchekwa nchekwa okporo ụzọ ka ukwuu site na iwebata sistemụ njikwa ọhụhụ ọhụrụ - otu igwe atụtụ akpaka na ụlọ atọ.
"Chee Eshia, Chee echiche Hong Kong" na-akpali ndị na-ege ntị na London
Ortergbọ elu Porter na-agbasawanye ọrụ Orlando-Melbourne na obodo atọ